Wood Veneer + Fog Firoglace, ny Minimaliste kokoa no ahazoana aina | Taihe Maitian Design
Home / Interior design / Wood Veneer + Fog Firoglace, ny Minimaliste kokoa no ahazoana aina | Taihe Maitian Design
2020 / 10 / 26 FisokajianaInterior design 843 0
“Mila trano lehibe misy varavarankely lehibe aho, izay hipetrahan'ny tara-masoandro amin'ny tany ary manafana ny lambako.” Tanora ary manana fahatsiarovana lava, ity tononkira mahazatra ity dia nanjary endrika voalohany tao an-trano iriko mafy. Ity trano vaovao maotina ity, noho ny mpamorona, dia nahafa-po ahy rehetra ao an-trano: varavarankely lehibe, tara-masoandro mafana, fandalinana mangina, lakozia manitra …… rehetra amin'ny voninkazo faran'izay bitika feno fifaliana. Rehefa manokatra ny varavaran'ny tranonao ianao dia hahita ny hazavana avy eo amin'ny lalantsara maizina. Ilay hazavana, eo am-baravarankely fandalinana, teo am-baravarana fidirana, ary izaho, nifanena, toa ny fanantenana!
Ny fijerin'ny faran'ny fidirana dia ny fifindrana eo an-trano sy any ivelany, ary ny fahatsapana ny fombafomba dia miangona tsimoramora amin'ny làlana mihetsiketsika azon'ny hazavana sy aloka. Ny vilia fitaratra sy varavarana fitaratra eo afara dia manivana ny jiro amin'ny habakabaka ary mitazona atmosfera mangarahara sy misokatra. Ny kanto kanto aseho dia mitondra fihetsiketsehana bebe kokoa sy habakabaka kanto amin'ny habakabaka, mahatonga ny fidirana ho kely amin'ny galeriana kanto. Ny endrika tsy manelingelina sy ny hazavana mijanona eo amin'ny habakabaka dia mametraka ny endrika milamina sy malefaka ao an-trano miaraka amina sosona manankarena, mahatonga ny fiainana ho fonosina amin'ny fahasambarana sy fifaliana.
Ny tompony dia manana filàna an-habakabaka ho an'ny birao an-trano, hianarana sy hifandraisana, ny mpamorona dia nanomana efitrano misy fampiasa maro. Izy io dia ampiasaina ho toy ny fianarana, kaligrafi ary birao, ary toerana ahazoana aina amin'ny resaka lalina na fialan-tsasatra lalina. Niniana noforonin'ilay mpamorona ny endrika ambadiky ny fandalinana ary namolavola ny efitrano iray manontolo ho fitoeram-boky, na mihidy na misokatra, virtoaly ary tena izy. Ny firafitra misokatra sy tsotra an'ny façade, miaraka amin'ireo varavaran'ny fitahirizam-boky ho amin'ny fizarana ny fahatsapana ny tsipika ny haben'ny habaka misy fikasana tsotra, manome ny toetra tsotra sy kanto. Raha te hiroboka amin'ny tontolonao manokana ianao dia azonao atao ny manidy moramora ny varavaran'ny efijery fandinihana mba hitoka-monina sy ivelan'ny fifandraisana mivantana. Ny tsipika fifamoivoizana eo anelanelan'ny elanelana roa dia samy marindrana sy mitsivalana, ary mikoriana ihany koa izy ireo, izay mampanan-karena be ny fahalianana sy ny fifandraisan'ny habaka.
Dingana iray isaky ny mandeha, ny fijerena ny fiainana, ny fanantenana ary ny fisaintsainana ny fiainana eny amin'ny habakabaka dia natambatra. Arakaraky ny hidiranao lalina ao anatiny no ahazoanao aina kokoa sy manaitra ny toerana.
Ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny efitrano fisakafoanana, ny làlana avaratra atsimo dia mitondra hazavana voajanahary mamirapiratra avy any ivelany, izay misy fiantraikany mazava eo amin'ny habakabaka. Ao amin'ny habakabaka misokatra tanteraka, mifehy hentitra ny haben'ny habaka ny mpamorona, ary mandanjalanja ara-dalàna ny haben'ny fanaka, manamboatra ny haavony sy ny fifandraisan'ilay toerana. Ny fanaka zavakanto dia apetraka tsirairay, izay azo ampiharina sy milalao. Ao ambadiky ny tontonana hazo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, misy habaka fitehirizana be dia be, hisorohana an-tsakany sy an-davany ny korontana. Ny tompony, izay nipetraka tany ivelany nandritra ny taona maro, dia tia ny fahatsapana mafana ny fatana. Nanararaotra ny ambaratongan'ny firafitry ny kabinetra ilay mpamorona ary nanamboatra fatin'afo, nikapoka afo, hanafana ny fahatsapana fa an'ny ao an-trano.
Ny takelaka fisakafoanana vato fisaka, latabatra vita amin'ny hazo fisaka misy latabatra fisakafoanana manokana, fitoeran-jiro jiro fotsy, firindrana ara-drariny sy malefaka dia napetraka ao amin'ny sary malefaka indrindra. Eto koa dia mitondra ny fisakafoanana efa-taona an'ny fianakaviana iray misy telo, na maivana na manan-karena, indraindray eny an-tsaha, ny tsiro ny fo nomena, manandrana ny fanehoana fahafaham-po, ity no fahasambarana tsotra izao! Eo anelanelan'ny efitrano fisakafoanana sy ny lakozia dia mandika ny lalàna tsy misy varavarana, hahazoana fiainana tena fiainana toa ny zava-niseho, ny traikefa azo tsapain-tanana dia hita amin'ny antsipiriany sarobidy rehetra.
Varavarana fitahirizana hazo, mitondra ny fiasan'ny habakabaka sy ny fizarana voajanahary amin'ny habaka manokana izy io, toa voalamina milamina araka ny filaharany avy any aoriana. Rehefa milatsaka mangina ny alina dia misintona moramora ny varavaram-baravarana toy ny rindrina sary, hany ka ny fisarahana sy ny fahanginana, na andro na alina, dia niavaka tsara. Izy ireo dia afaka mifamatotra amin'ny tsirairay na mahaleo tena, ao amin'ny habakabaka anatiny, dia ny fianakaviana misy toerana manokana telo. Ny efitranon'ilay mpivady, ny efitranon'ireo ankizy sy ny efitranony fianarana sy ny fidiovany, dia tsy mifanelingelina. Ity fizarazarana miasa manokana ity dia mety noho ny rafitra tany am-boalohany, vitsy dia vitsy ny rindrina azo esorina. Tamin'ny alàlan'ny fisehoan-javatra mahamarina ireo faritra miasa, dia nozarain'ny mpamorona ho lasa roa ny lalantsara anatiny, nohafoheziny ny elanelam-baravarana teo anelanelan'ny lalantsara ary nitondrany tsikelikely ny traikefa niainany.
Ny efitrano fatoriana tompony dia tsotra amin'ny madio, maivana ary tsotra. Jiro, boky ary farafara no tontolon'ny alina, na inona na inona hazavana.
Ny habakabaky ny efitranon'ny zazalahy dia fotsy sy fotsy, fotsy sy mainty elanelam-potoana, fotsy toy ny tsy fananany tsiny, volondavenona toa ny eritreriny, ary mainty, toy ny zavatra niainany rehetra, dia hiaraka aorian'ny fahendrena mangina.
Arakaraky ny tsotsotra ny fahatsorana dia vao mainka hitanao ny tena toetran'ny zavatra. Noho izany, amin'ny famolavolana ny efitrano fandriana, dia mampiasa teknika tsotra sy mivantana izahay hisorohana ny famolavolana endrika ary hanehoana ny kalitaon'ny habakabaka miaraka amin'ny firafitry ny akora voajanahary. Ny ambaratonga telo-tsotra tsotra sy manan-karena amin'ny fandefasana modely, ny fisafidianana lambam-pandriana maoderina tsara tarehy, sary hosodoko maoderina tsara tarehy, ny tahan'ny lokon'ny lamba amin'ny rindrina ary ny habaka ary ny fiovana lehibe, ny kalitaon'ny fiainana dia tsy hita. Ny fotsy fotsy, fotsy fotsy ary fotsy volomparasy mafana, eo ambanin'ny fifandraisan'izy telo, dia misy fifanakalozan-kevitra amin'ny lafiny maro sy ny fotoana ary ny habaka, mamoaka ny toetra tsotra sy malefaka amin'ny toerana maoderina amin'ny fetrany farany ary mamorona fomba fonenana tokana. .
Nino foana izahay fa tsy misy misaraka ny fiainana sy ny zavakanto, fa mpiara-miasa mifameno amin'ny dia iray ihany. Tsy tianay ny hanana ny valin'ny fomba amam-pitsipika ny tompony, na izahay te-hamorona efitrano modely tsy miova. Satria tsy tokony hoferana amin'ny fomba fanaka ny fanaka, tokony ho tafiditra koa ny habaka, mifanaraka amin'ny safidin'ny olona sy ny fahazarany. Ireo "fifanoherana" ireo ihany no mamorona ny famirapiratan'ny toerana fanatsarana trano.
Anaran'ny tetikasa: Plain-Jane
Toerana: Ningbo-ART Lanshan
Faritry ny tetikasa: 218m2
Namboarin'i: Taihe Maitian
Mpitantana Tetikasa famolavolana: Min Wu
Famolavolana tetikasa: Qianqian Zhang
Namboarin'i Chen Chen Ma
Lahatsoratra: Pan Zhi
Saripikan'i: Park Yen
Previous :: 50 Metatra toradroa amin'ny haavo maoderina maoderina, mety hitranga tsy voafetra | JUDESIGN House Union Design Next: Io no minimalism miorim-paka amin'ny fiainana izay tsara tarehy mandrakizay